Ugu yaraan 10 qof oo ku dhimatay qarax gaari oo ka dhacay Muqdisho - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaUgu yaraan 10 qof oo ku dhimatay qarax gaari oo ka dhacay Muqdisho
March 13, 2017 Abdi Omar Bile Somalia 0
Ugu yaraan 10 qof oo ku dhimatay qarax gaari oo ka dhacay Muqdisho. [Xigashada Sawirka: EPA]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhimatay qarax gaari oo ka dhacay caasimada Soomaaliya ee Muqdisho maanta oo Isniin ah, sida ay sheegeen ilo-wareedyo dhanka ammaanka ah iyo dhanka caafimaadka.
Gaari laga soo buuxshay walxaha qarxa ayaa ku qarxay banaanka hore ee huteel Weheliye oo saran jidka Maka Al Mukarama, sida ay ilo-wareedyadu sheegeen.
In ka badan 15 qof ayaa ku dhaawacmay qaraxa, sida saraakiil caafimaad oo jooga Muqdisho ay taleefoonka ugu sheegeen warsidaha Puntland Mirror.
Waxaa jirta baqdin ku saabsan in tirada dhimashada ay kordhi karto, sida saraakiisha caafimaadku ay sheegeen.
Ururka hubaysan ee Al-Shabaab ayaa sheegatay masuuliyada weerarkaas maanta oo Isniin ah dhacay, sida uu ku waramay raadiyaha Al-Shabaab ee Al Andalus.
In tii lagu guda jiray bilihii u dambeeyay, ururka hubaysan ayaa kordhiyay weeraradooda gudaha caasimada.
December 1, 2016 Maleeshiyada hubaysan ee Al-Shabaab oo odayaal dhaqameed ku gowracday gobolka Mudug
Mogadishu car bomb kills at least 10
Haayadaha amaanka gobolka Bari ee Puntland oo soo bandhigay saddex sarkaal oo Al-Shabaab ah
Boosaaso-(Puntland Mirror) Haayadaha amaanka gobolka Bari ee Puntland ayaa maanta oo Sabti ah soo bandhigay saddex sarkaal oo Al-Shabaab ah kuwaasoo ciidamada ay kusoo qabteen howlgalo ka dhacay gobolka Bari, sida ay sheegeen saraakiisha dowlada. [...]
Ciidamadda PSF oo sheegay in afar maleeshiyo Al-Shabaab ah lagu dilay howlgal ka dhacay Buuraha Caalmadoow
Garoowe-(Puntland Mirror) Afar maleeshiyo Al-Shabaab ah ayaa Ciidamadda Ammaanka Puntland ee PSF ay ku dileen howlgal Axadii dhacay, sida PSF ay ku sheegeen bayaan ay soo dhigeen Facebook-kooda. PSF ayaa bayaanka ku sheegay in howlgalka [...]
Garoowe-(Puntland Mirror) Gobolada Puntland ayaa maanta oo Axad ah looga dabaaldegay Ciidul Adxa. Magaalada caasimada ah ee Garoowe, salaada ciida ayaa lagu tukaday masaajidyada iyo garoonka kubada cagta Mire Awaare, halkaas oo ay isugu tageen [...]